Kukosha kweEcommerce muSpain | ECommerce nhau
El nhamba yevatengi vezvigadzirwa nemasevhisi online inoramba ichiwedzera, gore rega rega Spain. Mu 2016 vangangoita mamirioni gumi nematanhatu vanhu vakaita zvavakatenga kuburikidza ecommerce muSpain. Iyi nhamba inomiririra ingangoita 56% yehuwandu hwevanhu vari pakati pemakore gumi nematanhatu nemakumi matanhatu ekuberekwa uye 16% yeavo vanoshandisa internet mune imwecheteyo renji.
Iyo data pachayo inogona kuve inotyisa uye exponential. Asi kana tikaenderera mberi zvishoma, tinozviona izvozvo iyo tsika inoraira kuenda kunotenga online kune zvakanakira izvo izvi zvinofungidzirwa. Nhasi a 51% yevatengi ita zvaunotenga mu nzira mbiri idzi zvitoro zvepanyama kana zvitoro zvepamhepo apo a 36% achiri kusarudza chete kuita iyo kutenga muzvitoro zvetsika, kureva muviri.
Shanduko inomuka kwemakore mashoma anotevera inoratidza izvo vanenge 78% yevatengi vachatenga nenzira zvisina kujeka muzvitoro zvemuno kana e-commerce, apo chete iyo 13% icharamba ichingotenga muzvitoro zvepanyama.
Kana isu tikataura nezve izvo vanhu vanoshandisa pakutenga pamhepo, mu2016 avhareji anoisa iyo avhareji yemari inosvika € 75 pakutenga.
Izvo zvikonzero zvinotungamira vatengi ku buy online Ivo vakasiyana. Tine zvinhu zvakaita sekupa kunowanikwa chete vanoshandisa internet, mitengo yakaderera pane yechitoro chemuviri, hukuru hwakakura hwezvigadzirwa kuti ukwanise kutenga zvinhu zvepasi rese uchibhadhara iwo mutero, unogona kuzviita kubva kunyaradzo yeimba yako uye chero nguva pasina kutongwa nemaawa ebhizinesi.
Iwo mabhizinesi zvikamu zvinonyanya shopping online inogadzirwa ndeaya: kufamba uye kutandara, tekinoroji, fashoni uye kumba. Kudzidziswa pamhepo, zvigadzirwa zvemitambo, mhuka dzinovaraidza uye optics zvine nzvimbo inozivikanwa mu pamhepo vatengi runyorwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Kukosha kweEcommerce muSpain
Izvo zvikonzero zvishanu zvekuve yakanakisa ecommerce chitoro